कमला बनिन् अमेरिकाको कार्यवाहक राष्ट्रपति, कसरी सम्भव भयो यस्तो ? — Sanchar Kendra
कमला बनिन् अमेरिकाको कार्यवाहक राष्ट्रपति, कसरी सम्भव भयो यस्तो ?
काठमाडौं । कमला ह्यारिस अमेरिकाको राष्ट्रपतिको सबै शक्तिहरुसहित राष्ट्रपतिको रुपमा काम गर्ने पहिलो महिला बनेकी छिन् । बाइडेनले राष्ट्रपतिको रुपमा आफूसँग भएका सबै शक्तिहरु उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसलाई हस्तान्तरण गरेपछि उनी सर्वशक्तिमान भएकी हुन् ।
राष्ट्रपति बाइडेनले शुक्रबार आफ्नो राष्ट्रपतिको हैसियतका सबै शक्तिहरु उपराष्ट्रपति ह्यारिसलाई हस्तान्तरण गरेका थिए । राष्ट्रपति बाइडेनले कोलोनोस्कोपीको लागि एनेस्थेसिया (बेहोस पार्ने प्रक्रिया) लिनका लागि आफ्नो सबै शक्तिहरु उपराष्ट्रपतिलाई हस्तान्तरण गरेका हुन् ।
उनी हरेक वर्ष कोलोनोस्कोपी गराउँछन् । अमेरिकी राष्ट्रपछि आज शनिबार ७९ वर्षका भएका छन् । अमेरिकी संविधान अनुसार राष्ट्रपतिले केही समयको लागि कसैलाई पनि आफ्नो स्थानमा कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त गर्न पाउँछन् ।
सीएनएनका अनुसार कमला ह्यारिस ८५ मिनेटको लागि अमेरिकाकै सबैभन्दा शक्तिशाली व्यक्ति बनिन् । अहिलेको लागि यो जिम्मेवारी उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसलाई दिइएको हो ।
यो जिम्मेवारी यसकारण पनि महत्वपूर्ण छ किनकि हालै बाइडेन र ह्यारिसबीच तनावको खबर बाहिरिएको थियो । यसअघि बाइडेनले २०१९ मा फुल बडी टेस्ट गराएका थिए । परीक्षणमा उनलाई पूर्ण रुपमा स्वस्थ र राष्ट्रपतिको कर्तव्य सफलतापूर्वक निर्वाह गर्नको लागि मेडिकल रुपमा उपयुक्त पाइएको थियो ।
अहिले संविधानअनुसार उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रपतिको शक्ति हस्तान्तरण गरिएपछि अमेरिकाका सबै सैन्य शक्ति कमला ह्यारिसले प्रयोग गरेकी छिन् । यस क्रममा उनले वेस्ट विंगमा रहेको आफ्नो कार्यालयबाटै काम गरिन् ।
आज ७९ औं जन्मदिन मनाउँदै छन् बाइडेनः
बाइडेन अमेरिकी इतिहासमा राष्ट्रपति पद सम्हाल्ने सबैभन्दा उमेरदार व्यक्ति हुन् । आज बाइडेन आफ्नो ७९ औं जन्मदिन मनाइरहेका छन् । जन्मदिनको एक दिन अघि उनी शुक्रबार बिहान वासिङ्टन बाहिर वाल्टर रिड मेडिकल सेन्टर गए ।
हुन त उनी हरेक वर्ष उपचार र परीक्षण गर्ने गर्छन्, तर यसवर्ष जनवरीमा राष्ट्रपति पद सम्हालेपछि यो उनको पहिलो उपचार हो । कोलोनोस्कोपी परीक्षणका बेला बाइडेनलाई बेहोस पारिएको थियो । त्यसैले यतिबेला राष्ट्रपतीय शक्ति ह्यारिस समक्ष थियो ।
कमला ह्यारिस पहिलो अश्वेत र दिक्षण एशियाली मूलकी उपराष्ट्रपति बनेकी थिइन् । पास्कीका अनुसार बाइडेन एनेस्थियामा हुँदासम्म ह्यारिसले राष्ट्रपतिको हैसियतले सत्ता सम्हालिन् । यद्यपि, उनले वेस्ट विङ्गस्थित आफ्नो अफिसबाटै काम गरिन् ।